ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲအတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ စာပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် | Ko Rohingya
ကျွန်ုပ်တို့၏ Burmese Muslim Youths For Human Rights and Justice အစည်းအရုံး (Group)မှနေ၍ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၏ သမ္မတဖြစ်သူ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၃) ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဖတ်ကြားချက် တရားဝင်စာကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ယင်းစာကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းထံသို့လည်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဖဘပေ့ခ်ျ (https://www.facebook.com/pyithuhluttaw.gov.mm)၏ မက်ဆေ့ဂ်ျမှတဆင့်ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့လည်း အီးမေးလ်မှတဆင့် မိတ္တူကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း ဒီမိုကရေစီ နည်းစနစ်နှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး သိရှိနိုင်စေရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးလိုက်ပါသည်။
(၃) အလ်ဟာဂ်ျ ဃာဇီ ဦးတင်မောင်သန်း
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီးသော တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အာဏာရ အစိုးရအနေနှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်အခါ၌မျှ မရှိခဲ့ကြောင်း သမိုင်း၏ အရှိ တရားကို လျစ်လျူ၍ အမှန်တရားကို ငြင်းပယ်ကာ လူမျိုးအစွန်းရောက်ဝါဒနှင့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒတို့ကို အခြေခံ၍ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး၏သမိုင်းအား ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် လူကြီးမင်းတို့၏ အစိုးရအာဏာပိုင် အကြီးအကဲ များမှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနက်မှ လူမျိုးအုပ်စု တစ်စုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထပ်မံ၍ ငြင်း ဆန်ထားသည်ကိုလည်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။ သို့ပါ၍ လူကြီးမင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် မည်သူနှင့်မဆို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိနေခဲ့သော လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်မျိုး အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းကို အထောက်အများနှင့်တကွ ဆွေးနွေး၍ သက်သေထူ တင်ပြပေးမည့် ပါရဂူဘွဲ့ရ နိုင်ငံတကာ သမိုင်း ပညာရှင်ကြီးများဖြစ်ကြသော ပါမောက္ခ Dr Abid Bahar နှင့် ပါမောက္ခ Dr. Habib Siddiqui တို့နှစ်ဦးနှင့် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ (Debate) တစ်ပွဲအား ကျွန်ုပ်တို့၏ Burmese Muslim Youths For Human Rights and Justice အစည်းအရုံးမှ တာဝန်ယူ၍ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်မည့် မည်သည့် နိုင်ငံတကာစင်မြင့်တွင်မဆို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာဌာနများနှင့် ဂုဏ်သရေ ရှိ လူကြီးမင်းများ၏ ရှေ့မှောက်တွင် တာဝန်ယူ ကျင်းပပေးသွားပေမည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိုရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ (Debate) သို့ မတက်ရောက်နိုင်ပါက လူကြီးမင်းတို့၏ အာဏာရအစိုးရမှ သမိုင်းပညာရှင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ကို စေလွှတ်၍ တက်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လိုပါကလည်း ကြိုဆိုပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု၏ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လက္ခဏာများအနက်မှ လက္ခ ဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း International Association of Genocide Scholars ၏ ဥက္ကဌဟောင်း Professor William Schabas မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ လူကြီးမင်းတို့သည် သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်ကို ငြင်းဆန်နေသူများ မဟုတ်ကြောင်း၊ လူကြီးမင်းတို့၏ ယုံကြည်ယူဆချက်ဖြစ်သည့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မည်သည့်အခါကမျှ မရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် မည်သည့်ခေတ်ကာလ ကမျှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအုပ်စု တစ်စု မဖြစ်ကြောင်းကို လူကြီးမင်းတို့မှ အခိုင်အမာ သက်သေပြရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစည်း အရုံးမှ တာဝန်ယူ စီစဉ်ကျင်းပပေးမည့် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ(Debate)သို့ တက်ရောက်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ် ကြားလိုက်ပါသည်။
သမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ (Historical Debate) အား တာဝန်ယူစီစဉ်ပေးရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
PDF ဖိုင်ဖြင့် ဒေါင်း၍ ဖတ်ချင်သူများအတွက် လင့်ခ်များ
This entry was posted on February 6, 2013, in စိန်ခေါ်မှုများ, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice and tagged စကားစစ်ထိုးပွဲ, စစ်အာဏာရှင်, စိန်ခေါ်မှုများ, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သမိုင်း, သမ္မတ, သားသတ်သမား, အင်ပါယာ, အစ္စလာမ်, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကြီး, ကြေညာချက်, မြန်မာ, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မေးလိုက်ပါရစေ ဦးကိုကိုကြီး
အွန်လိုင်းတွင် အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေးများ လုပ်ဆောင်၍ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီးနေသူများအား စိန်ခေါ်ကြောင်း ကြေညာချက် →